ShweMinThar: September 2008
Water, Smoke, Drink and Active Mind
(၁) ဤရာစုနှစ်တွင် လူသန်းတစ်ထောင်ခန့် ဆေးလိပ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ဆေးလိပ်သောက်သုံးနှုန်းအား လျှော့ချရေးမူဝါဒ ၆ရပ်အားလိုက်နာရန်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများအား ပန်ကြားခဲ့သည်။ ထိုမူဝါဒ ၆ရပ်မှာ MPOWER ဟုအတိုကောက်မှတ်သားနိုင်သည်။
M ဆိုသည်မှာ Monitoring ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် မူဝါဒများအား ကျင့်သုံးရေးဖြစ်သည်။
P ဆိုသည်မှာ Protecting People ဆေးလိပ်ကင်းစင်နယ်မြေများတည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများအား ကာ ကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
O ဆိုသည်မှာ Offering ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသောသူများအား ပေးအပ်သောဝန်ဆောင်မှုကိုဆိုလို သည်။
W ဆိုသည်ကား Warning ဆေးလိပ်နှင့် ပတ်သက်သော အန္တရာယ်များအား ပြည်သူလူထုအား အသိပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
E မူ Enforcing ဆေးလိပ်ကြော်ငြာများနှင့် အခြားဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ တားမြစ်သည်ကို အားဖြည့်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
R ကား Raising ဆေးလိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခွန်တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။
WHO မှ အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုအား လျှော့ချရေးအတွက် ထိရောက်လွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အသစ်တွင် တင်ပြခဲ့သည်။ သေဆုံးနှုန်းအများဆုံးမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ တွင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ အားလုံး၏၂၅%ကျော်မှာ တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံပြီးနောက် အိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ ရုရှနှင့် အမေရိကန်တို့ နောက်မှအစဉ် လိုက် လိုက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံပိုင် ဥပဒေအရ ဆေးလိပ်ကင်းမဲ့ဇုံ၊ဆေးလိပ်ကြောငြာများတား မြစ်ရေးများကို လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သောလူများ အားလုံး၏ ၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ပါဝင်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိ သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ဆေးရုံနှင့် ကျောင်းများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပေးထားဆဲဖြစ် သည်။ ဆေးလိပ် ကုမ္ပဏီများသည် ချမ်းသာသောနိုင်ငံများတွင် တင်းကျပ်သောဈေးကွက်များနှင့် ပိုမိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
Ref: American Mosaic 2008.
(၂) ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် ဂေါက်ရောဂါ
အချို့သောအစားအစာများဟာ Gout လို့ခေါ်တဲ့ဂေါက် အဆစ်နာရောဂါထစေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လက်ခံထားခဲ့ကြတာဖြစ်သော်လည်း သုတေသီများက ယနေ့ယုံကြည်နေကြတာ ကတော့ ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်းနှင့် စိုထိုင်းခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေပြီး ဂေါက်ရောဂါ ထစေတယ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါရှိသူများအား ဂေါက်ရောဂါထပြီးအဆစ်ရောင်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေဟာ ဘယ်လိုအန္တရယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကြုံပြီးမှရောဂါထသလဲ၊ ဂေါက်ရောဂါငြိမ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး၌ ရှိနေခဲ့ သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းများကို Online မှဖြေဆိုစေခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်များကတော့ ၃၀.၅ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အပူချိန်ထက်မြင့်သော အပူချိန်များနှင့် ၁၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် အေးသောအချိန်များမှာ ရောဂါထလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါရှိသူတွေကို ရောဂါမထအောင် အကောင်းဆုံးနည်းကဘာလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ် ဆေးကျောင်းမှ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ဦးမှ "ရာသီဥတုပူပြီး စိုထိုင်းတဲ့အခါ ရေများများပို၍ သောက်ပါ"လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Ref: R.D August 08
(၃) အရက်အများကြီးသောက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ
မျက်လုံးများအတွင်းမှာရှိတဲ့ သွေးကြောများကို ကျယ်စေပါတယ်။ မျက်လုံးတွေ ရီဝေလာပြီး နီလာမယ်။ ကြည့်လို့လည်း မကောင်းတော့ဘူး။
ညမှာ အရက်တွေအများကြီး သောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ အရက်နာကျတဲ့အခါ မှတ်ဥာဏ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျဆင်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင် ချို့တဲ့မှု လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဗြိတိသျှကင်ဆာဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားသော အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရာ အရက်ကိုပုံမှန် အများကြီးသောက်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်း ၄၀ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုများတယ်။
အရက်အများကြီးသောက်ခြင်းအားဖြင့် သွေးဖိအား ထိုးတက်သွားနိုင်တယ်။ ရင်တုန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ အရက်သမား၊ ယစ်ထုတ်တွေဟာ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် လေဖြတ်မှုပိုပြီးဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
အရက်အများကြီးသောက်ခြင်းအားဖြင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သွားစေတယ်။ ဒီဒဏ်ကို အရေပြားက ပထမ ဦးဆုံးခံစားရတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့ပြီးကွာကျမယ်။ အရေပြားတွေ အက်ကွဲမယ်။
Ref: H & F, 2006, Dec.
ဂျာမန်သုတေသီများရဲ့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ နေ့စဉ်ရေလက်ဖက်ရည် ပန်းကန်ခြောက်ခွက်သောက်ခြင်းဟာ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းကို (တစ်နေ့လျှင် ၅၀ကယ်လိုရီခန့်)မြှင့်တင်ပေး နိုင်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ၅ပေါင်ခန့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေချည်းမသောက် နိုင်ဘူးဆိုရင် အရည်ရွှမ်းတဲ့သစ်သီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေရဲ့ ရနံ့ထည့်သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဥပမာ – သံပရာသီး၊ လိမ္မော်သီးစိပ် လေးများထည့်ပါ။
(၆) တက်ကြွရွှင်လန်းစေနိုင်သော နည်းငါးမျိုး
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းစေဖို့ စိတ်ဖိစီးမှုဖြေပျောက်ရန် အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ။ ပြန်လည်ရွှင်လန်း တက်ကြွစေဖို့ နည်းတချို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်ပါ။
တိတ်ဆိတ်ကာ အသံလုံတဲ့အခန်းထဲ ၀င်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မကြားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး။ အသက်ပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါ "အင်း"ဆိုပြီး အသံရှည်ဆွဲကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူထုတ်ပါ။ ရှူသွင်းလိုက် ရှူထုတ်လိုက်သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါ။ သင့်စိတ်ပေါ့ပါးသွားတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
စာရွက်တစ်ရွက်ယူလိုက်ကာ "ငါ့ဘ၀မှာ ဘာကိုကျေးဇူးတင်မိလဲ"လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်တဲ့အခါ စိတ်ထဲရောက်လာတဲ့ အရာငါးခုကိုချရေးပါ။ သင်ရဲ့မျက်မှန်အသစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလို သင့်ရဲ့ သစ္စာရှိတဲ့ ခွေးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကျေးဇူးတင်မယ်သာဆိုရင် တင်လို့ရတာတွေ အများကြီးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် လောကကြီးကို ပိုပြီး အကောင်းမြင်တတ်ကာ ပိုနေပျော်လာမှာပါ။
စားပွဲတွေရှင်းကာ ဖိုင်တွေ၊ စာရွက် စာတမ်းတွေကို စနစ်တကျအစီအရီထားပါ။ အ၀တ်ဗီရိုရှင်းပါ။ ခြံထဲပေါင်းသင် မြက်နုတ်ပါ။ အားရကျေနပ်တဲ့ခံစားမှုဟာ စိတ်ဖိစီးမှုပြေပျောက်စေတဲ့ နည်းတစ်မျိုးပါ။
မြူးကြွတက်ကြွစေနိုင်တဲ့ သီချင်းနားထောင်ခြင်းက စိတ်ဓာတ်တက်ကြွပျော်မြူးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်လုံးလောက်ဆောင်ထားကာ အားရင်အားသလို သီးချင်းနားထောင်ပေးပါ။ အလုပ်အားလပ်ချိန်မှာ သီချင်း နားထောင်ခြင်း၊ အလုပ်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်နားထောင်ခြင်း၊ အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့ ကက်ဆက်ဖွင့် ထားခြင်းလုပ်ပေးပါ။
မွှေးရနံ့ဆီများစွာဟာ စိတ်အေးချမ်းတည်ငြိမ်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ ရနံ့၊ကတိုးနံ့၊ စန္ဒကူးနံ့စတဲ့ အနံ့ရှိတဲ့ မွှေးရနံ့ဆီတစ်ပုလင်းဆောင်ထားကာ လိုအပ်တဲ့ အချိန်တိုင်းထုတ်ထုတ်ရှူပေးပါ။ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုင်ပုဝါမှာ မွှေးရနံ့ဆီတစ်စက်နှစ်စက်လောက်ဆွတ်ကာ ဆောင်ထားပေးပါ။
Posted by Alex Aung at 9:28 PM No comments:
Please givealittle time for someone!
အိမ်ထောင်သက် (၂၁)နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော့်မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ညစာအတူ ထွက်စားပြီး ရုပ်ရှင်အတူတူ
ကြည့်စေချင်ကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမက ပြောပါတယ်။
သူကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအမျိုးသမီးလည်း ကျွန်တော့်ကို
သိပ်ချစ်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ ရှိနေချင်တာ သူသိတယ်တဲ့။
ကျွန်တော့်မိန်းမပြောနေတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ မုဆိုးမအဖြစ်
ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေတာ (၁၉)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အမေပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့
အလုပ်တွေနဲ့ သားသမီး(၃)ယောက်အတွက် တာဝန်တွေကြောင့် အမေ့ဆီကို
အကြောင်းထူးရှိတဲ့ တခါတရံကလွဲလို့ သိပ်မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။
အဲဒီညကတော့ အမေ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့အတူ ညစာထွက်စားပြီး
"သား... နေရောကောင်းရဲ့လား။ ဘာများဖြစ်နေလဲ?"
အမေဟာ ညည့်နက်မှဖုန်းလာရင်၊ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် အပြင်ထွက်စားဖို့ခေါ်ရင်
သတင်းဆိုးတွေများ ရှိလို့လားလို့ သံသယ၀င်တတ်တဲ့သူပါ။
"မဟုတ်ပါဘူး အမေရယ်။ အမေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ပြီး စကားလေးဘာလေး
ပြောချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ အမေနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲလေ"
အမေက စဉ်းစားသလို ခဏငြိမ်သွားပြီးမှ "အရမ်းကောင်းတာပေါ့ သားရယ်" လို့
အဲဒီအပတ် သောကြာနေ့မှာ ရုံးဆင်းတာနဲ့ အမေ့ကိုကားနဲ့ သွားကြိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းလှုပ်ရှားနေမိတယ်။ အမေ့အိမ်ကို
ရောက်တဲ့အခါမှာ အမေလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေတာ
တွေ့ရပါတယ်။ အမေက ကုတ်အကျီလေးဝတ်ပြီး တံခါးဝမှာ စောင့်နေပါတယ်။
ဆံပင်လေးတွေကို အခွေအလိပ်လေးတွေ လုပ်ထားပြီး အဖေနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ပွဲတုန်းက ၀တ်ခဲ့တဲ့ အကျီလေးကိုပဲ ၀တ်ထားပါတယ်။
အမေ့မျက်နှာပေါ်က အပြုံးဟာ နတ်သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါလိုပဲ
"အမေ့သူငယ်ချင်းတွေကို ငါ့သားလေးနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး ထမင်းစားမလို့
လို့ပြောလိုက်တော့ သူတို့တွေက အမေ့ကိုအထင်ကြီးနေကြတယ်။ သားနဲ့
ဘယ်တွေသွားတယ် ဘာတွေစားတယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုပြန်ပြောပြရဦးမယ်။
သိပ်သိချင်နေကြတယ်..." ကားပေါ်တက်ရင်း အမေကပြောတယ်။
ဆိုင်အကောင်းစားကြီးမဟုတ်ပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ နွေးထွေးမှုရှိတဲ့
ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တယ်။ ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးကြီး
တစ်ယောက်ရဲ့ ဟန်ပန်မျိုးနဲ့ အမေက ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ကိုင်ထားပါတယ်။
စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီးတော့ အစားအသောက်စာရင်းကို ကျွန်တော်က ဖတ်ပြရပါတယ်။
အမေက စာလုံးကြီးကြီးတွေကိုပဲ ဖတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ ဖတ်ရင်းတန်းလန်းနဲ့
မော့ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့်ကို ထိုင်ပြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အမေ့ကို
တွေ့ရပါတယ်။ အတိတ်ကို သတိရနေတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ အမေကပြောတယ်...
"သားငယ်ငယ်လေးတုန်းကတော့ အစားအသောက်စာရင်းကို ဖတ်ပြတဲ့သူက အမေပေါ့..."
"အခုတော့ အမေအနားယူပြီး ကျွန်တော့်ကို အလှည့်ပေးပေါ့... နော်အမေ..." လို့
ညစာစားရင်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် စကားကောင်းကောင်း ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဘာမှထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အခုလတ်တလော ကိုယ်ဘာတွေလုပ်တယ် ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အပြန်အလှန်
ပြောဖြစ်ကြတာပါ။ စကားပြောတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲဆိုရင် ရုပ်ရှင်တောင်
အမေ့ကို အိမ်ပြန်ပို့တော့ အမေက "အမေတို့ နောက်တစ်ခါလည်း အခုလိုပဲ
အပြင်ထွက်စားကြဦးမယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ အမေက ကျွေးမှာနော်..."
လို့ပြောလို့ ကျွန်တော် သဘောတူလိုက်ရပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်မိန်းမက "ညစာထွက်စားတာ ပျော်ခဲ့လား" လို့
အများကြီးပိုပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်..." လို့ ပြန်ဖြေမိပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ရုတ်တရက် ပြင်းထန်တဲ့ နှလုံးရောဂါခံစားရပြီး
အမေဆုံးရှာပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်းလို့ အမေ့ကို ကျွန်တော်
ဘာမှတောင် လုပ်မပေးလိုက်နိုင်ပါဘူး။ အမေဆုံးပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ
အမေနဲ့ကျွန်တော် သွားခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင်က ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း
မိတ္တူတစ်စောင်ပါတဲ့ စာအိတ်တစ်အိတ် ကျွန်တော့်ဆီကို ရောက်လာပါတယ်။
ဖြတ်ပိုင်းမိတ္တူနဲ့အတူ အမေရေးထားတဲ့ စာလေးတစ်စောင်ပါ ပါလာပါတယ်။
"သား... ဒီငွေတောင်းခံလွှာအတွက် အမေကြိုပြီး ပိုက်ဆံပေးခဲ့တယ်...
အဲဒီနေ့မှာ အမေသားတို့နဲ့ အတူရှိနေနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေလူနှစ်ယောက်စာအတွက် ပိုက်ဆံပေးခဲ့တယ်။ အမေ့သားနဲ့
သားနဲ့ညစာထွက်စားတဲ့ညဟာ အမေ့အတွက် ဘယ်လောက်အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတာ
အမေ့စာကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း
အချိန်မီပြောဖို့၊ သူတို့ရသင့်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့
ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကို အချိန်မီပေးဖို့ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ
ဘ၀မှာ ဘုရားနဲ့ မိသားစုထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့အရာ မရှိပါဘူး။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမို့လို့ ဘာသာပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အခုလို
မိဝေးဖဝေးနဲ့ တနယ်တကျေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ လူကြီးမိဘတွေနဲ့ တစ်အိမ်ထဲမှာ
အတူတူနေခွင့် ပြုစုခွင့်ရနေတဲ့သူတွေကို အားကျမိပါတယ်။ ကျွန်မလည်း
မိဘနဲ့အတူတူနေတဲ့ အချိန်တွေတုန်းက (မိဘခိုင်းတာရှိရင်တော့ အကုန်လုံး
လုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့်) မိဘနားသိပ်မနေခဲ့ပဲ အချိန်အားရင် ကိုယ်ဘာသာတစ်ယောက်ထဲ
နေတတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ မိဘနဲ့နေရတဲ့ အချိန်တွေကို တမက်တမော
ပြန်လိုချင်နေခဲ့ပါပြီ။ ဘ၀မှာ ကိုယ့်ဘာသာရုန်းကန်ရင်း
လူတွေအကြောင်းပိုသိလာတဲ့ အခါကျမှ နောက်ဆုံးကိုယ့်ဘက်မှာ
အမြဲတမ်းရပ်တည်တဲ့ သူတွေဟာ မိသားစုပဲဆိုတာ ပိုပြီးနားလည်လာမိပါတယ်။
မိဘနဲ့ အတူနေနေဆဲဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကိုလည်း
အလုပ်တွေရှုပ်နေပေမယ့် မိဘအတွက် အချိန်သပ်သပ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 8:43 PM No comments:
(၁) သင်၏ဦးနှောက် ဘာကြောင့် အဆီကိုလိုအပ်ရသလဲ
ဦးနှောက်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဆီအက်စစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ခန္ဓ္ဓာကိုယ်မှ ၄င်းတို့ကိုထုတ်မပေးနိုင်သောကြောင့် ထိုအက်စစ်များပါဝင်သော အစားအစာများကို စားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လေ့လာသူများက ယူဆထားရသည်မှာ ယင်းအဆီများသည် ဦးနှောက်ဆီသို့ အောက်ဆီဂျင် ထောက်ပံ့ပေးရုံ သာမက ဦးနှောက်ကလာပ်စည်းများ၏ အမြှေးပါးများကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် ခေါ်အသက်ကြီး၍ သတိလစ်တတ်သောရောဂါ၊အယ်လ်ဇိုင်းမားခေါ် သူငယ်ပြန်ရောဂါနှင့်အခြား နာမကျန်းရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
သင်၏ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဟုခေါ်သော ပါဝင်သော အစားအစာများကို တိုးမြှင့်စားသုံးရန်လိုအပ်သည်။ ယင်းကို ငါးကြီးဆီ၊ မြေပဲနှင့် အခြားအစေ့များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်အရှည်ဆုံးလူများဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ ၄င်းတို့၏ရိုးရာအစားအစာ တွင် ငါးပါဝင်မှုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ယင်းအဆီကို ဆော်လမွန်ငါးများ၊ အခွံမာသီးများ၊သစ်ကြားသီးများ၊ ပိုက်ဆံလျှော်ပင်၏ အစေ့တို့မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
(၂) နှာစေး၊ချောင်းဆိုးအတွက် ကောင်းတဲ့ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်
ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်က ၀မ်းကိုပူနွေးစေပြီးအာဟာရဖြစ်စေတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာကဆိုထားတာရှိပါတယ်။ နီဘရာစကာတက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာနရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုက ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်က ချောင်းဆိုး၊နှာစေးနှင့်လည်ချောင်းရောင်ခြင်းများ အတွက်ကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်ရှိ ကြောင်းဖော်ညွှန်းနေပါသည်။ သင်အအေးပတ်တဲ့အခါနြကအမသစ့ငူ ခေါ်သွေးဖြူဥများက လေရှူလမ်းကြောင်း သို့ရောက်ရှိသွားပြီး ကူးစက်မှုကိုတိုက်ထုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနှင့်သင့်အတွက်အခံရခက်တဲ့ လည်ပင်းရောင် ရမ်းခြင်းကိုစနက်ပျိုးပေးပါတော့တယ်။အိမ်သုံးဆေးနည်းကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှာအသုံးပြုစေခြင်းဖြင့်အဆုတ်အထူးကု
စတီဖင်ရင်န်နက်ကကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်က နြကအမသစ့ငူ ရောက်ရှိလာမှုကိုဟန့်တားပေးတားကြောင်း၊ ရောဂါ လက္ခဏာများကိုလျော့ပါးစေခြင်းနှင့်အတူ အအေးမိရောဂါကို ဆက်လက်တိုက်ထုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
(၃) ပန်းသီးစိမ်းစိမ်း ရနံ့မွှေးမွှေး
ခေါင်းကိုက်တတ်ပါသလားတဲ့။ ခေါင်းကိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ပန်းသီးစိမ်းစိမ်းလေးတစ်လုံးကောက်ယူပြီး အနံ့မွှေးမွှေးလေးကို တအားရှိုက်ပြီး ရှူကြည့်လိုက်ပါတဲ့။ သစ်သီးလေးတွေရဲ့ မွှေးရနံ့ဟာ မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ပဲ လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်လာစေကြောင်း အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ သုတေသန ပြုချက်အရ တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သစ်သီးလေးတွေရဲ့မွှေးရနံ့ဟာ ကိုက်ခဲနာကျင်စေတဲ့ ဦးနှောက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကြွက်သားတွေ ကျုံ့ဝင်ခြင်းကို နည်းပါးလျှော့ကျသွားစေတဲ့ အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုက်ဂရိန်းလို ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တတ်သူတွေ သစ်သီးရနံ့လေးတွေ ရှူလိုက်ပါတဲ့။
Ref: GHK. Nov 2007.
(၄) ခါးတုတ်လို့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့
ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါတဲ့ အဆီထုတ်ထားသော ဒိန်ချဉ်နဲ့ နို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီဓာတ်ကို လောင်ကျွမ်းပစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးသုတေသနပြုချက်အရ အဆီစုနေတဲ့ ခါးတုတ်ကြီးကိုတောင် အဆီလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒိန်းမတ်သုတေသီများဟာ လူအုပ်စု ၄အုပ်စုခွဲပြီးကယ်လ်စီယမ်ဓာတ် အလယ်အလတ်မှ အမြင့်ဆုံးကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာများအား ကျွေး၍လေ့လာစမ်းသပ်ကြည့်ရာ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်နည်းနည်းသာ စားသုံးသောသူများ သို့မဟုတ် ကယ်လ်စီယမ်အားဆေးပြားတွေ သောက်တဲ့ သူတွေထက် သွေးထဲမှာ အဆီဓာတ်လျော့နည်းသွားကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တန်နက်ဆီ ယူနီဗာစီတီမှ လေ့လာချက်အရလည်း တစ်နေ့လျှင် ကယ်လ်စီယမ် ၁၂၀၀မှ ၁၃၀၀မီလီဂရမ်အထိ မြင့်မားစွာ စားခဲ့တဲ့ လူဝကြီးများဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ၆၀ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းလာပါတယ်။ ကယ်လီရီတူပြီး ကယ်လ်စီယမ် ဓာတ်နည်းတဲ့ အစားအစာများကို စားတဲ့သူတွေထက်တောင် လူဝကြီးတွေက အဆီဓာတ်ပမာဏသုံးဆလောက် လျော့သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပိန်ချင်ရင် အဆီထုတ်နွားနို့နဲ့ ဒိန်ချဉ်ကိုသောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Ref: GHK, July 2008.
ဘရိုကိုလီခေါ် ပန်းမုန်လာ အစိမ်းရင့်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်နဲ့ ပန်းမုန်လာပွင့်တို့ကို တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး ၃ကြိမ်စား သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆီးအိမ်ကင်ဆာကို ၃၇ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ရို့စ်ဝဲပါ့ ကင်ဆာတက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရပြောပြကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၄င်းတို့မှာပါတဲ့ ပါဝါမြင့် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ခေါ် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ကြာကြာချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါ ပျက်စီးစေတဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင်အစိမ်းစားပါက ပိုကောင်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းပြီးစားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ထဲမှာရှိတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေဟာ ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တာမို့ ရေနဲ့အကြာကြီး မချက်ပါနဲ့။
Ref: GHK, July 08.
Posted by Alex Aung at 9:55 PM No comments:
For About Life ( Very Very Important )
ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ လူနဲ့ဆုံတဲ့အခါ သူနဲ့တစ်သက်သာ လက်တွဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
သူမရှိတော့ရင် အရာအားလုံးက နှောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ သင့်မြတ်အောင် နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်သူနဲ့ ဆုံဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀ကို ကူညီတဲ့လူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ သူ့ကျေးဇူးကို မှတ်ထားပါ။
သူဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကို လှည့်ပြောင်းပေးခဲ့သူ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကိုယ်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ပြုံးပြပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။
သူ့ကြောင့် အချစ်ကို ပိုနားလည်စေခဲ့လို့ပါပဲ။
ကိုယ်မုန်းခဲ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ပြုံးပြပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။
ကိုယ်နဲ့အတူနေနေတဲ့၊ ကိုယ့်ကို အဖော်ပြုနေသူကို လုံးဝကျေးဇူးတင်ပါ။
သူ့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ကိုယ်ရနေလို့ပါပဲ။
ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်သွားသူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်ပါ။
သူ့ကြောင့် လောကကြီးအကြောင်းကို ကိုယ်နားလည်ခဲ့လို့ပါပဲ။
ကိုယ်တိတ်တခိုးချစ်ခဲ့ဖူးသူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ သူပျော်ရွှင်ဖို့ တောင်းဆုပြုပါ။
သူ့ကို ကိုယ်ချစ်ခဲ့စဉ်က သူပျော်နေတာကိုပဲ ကိုယ်မြင်ချင်ခဲ့လို့ပါ။
ကိုယ့်ကို ထားခဲ့တဲ့လူနဲ့ ဆုံတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ အမှတ်တရ အတိတ်ခြေရာလေးတွေ ထင်ကျန်အောင် သူ နင်းလျှောက်ခဲ့လို့ပါပဲ။
တစ်ခါပဲဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ ဘ၀မှာ လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးဟာလဲ တစ်ခါပဲရှိတယ်။
Posted by Alex Aung at 8:55 PM No comments:
Love ...what is love?
(၁) လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပျော်ရွှင်ရမယ်။ ကိုယ့်အတွက် ပျော်ရွှင်သလို သူ့အ
တွက်လဲ ပျော်ရမယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့လူဟာ အလှပဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆွဲဆောင်မူ အ
ရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ အသက်ရှင်တာ မေ့လျော့ခြင်းကို လက်
ကိုင်ထားလို့။ မိန်းကလေးတွေ အသက်ရှင်တာ မှတ်သားခြင်းကို လက်ကိုင်
(၂) လင်မယားဆိုတာ ကပ်ကြေးတစ်လက်နဲ့တူတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ အသွား
နှစ်ခုဟာ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူး။ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေပါစေ ကြားဝင်လာတဲ့
ပစ္စည်းကိုတော့ အသွားနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီး ညှပ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။..S. Smith
(၃) လူငယ်တွေရဲ့ အိပ်မက်ဟာ အချစ်၊ ငွေကြေးနဲ့ ကျန်းမာရေးတဲ့။ ဒါပေမဲ့
တချိန်ချိန်မှာတော့ ကျန်းမာရေး၊ ငွေကြေးနဲ့ အချစ်လို့ ပြောင်းလဲသွားတာကို
သူတို့ သတိပြုမိကြလိမ့်မယ်။.....Paul Jiruidi
(၄) မိန်းကလေးတွေဟာ စကားပြောတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ကို လျစ်လျူရှူထား
တဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ပြောရင် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောတယ်။ သူတို့ကို ပျော်
အောင် စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေနဲ့ ဆိုရင် အသံတိုးတိုးနဲ့
ပြောတယ်။ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားလေးနဲ့ကျတော့ အသံတိတ်နေ
(၅) ယောက်ျားလေးတွေအတွက် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မူ
နဲ့ လောင်းကစားလုပ်တာပဲ။ မိန်းကလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့
လောင်းကစားလုပ်တာပဲ။....W. Somerset Maugham
အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ W. Somerset Maughamနဲ့ အချို့စာရေးဆရာရဲ့ စာ
အချို့ကို ဒီထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
(၆) အချစ်ဆိုတာ မီးတအိမ်နဲ့ တူတယ်။ အတွင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ ဆီနဲ့ ထွန်းညှိ
မှသာ မီးရဲ့ အလင်းရောင်ဟာ မမှိန်နိုင်ဘူး။ မညိမ်းနိုင်ဘူး။
Henry H. Hansa
(၇) ယောက်ျားလေးတွေ စီးကရက်တလိပ် သောက်ပြီး စိတ်ဖြေတာဟာ မိန်း
ကလေးတွေ တခါလောက် အားရပါးရ ငိုလိုက်တာနဲ့ ညီမျှတယ်။
(၈) မိန်းကလေးတွေရဲ့ နုပျိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ အဲဒါ
(၁၀) မိန်းကလေးတိုင်း ရွေးချယ်မူတခုကို ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့
ယောက်ျားလေးကိုလက်ထပ်ရင် စိတ်မချဘူး။ လူချစ်လူခင်နည်းတဲ့ယောက်ျား
လေး ကျပြန်တော့ စိတ်မပါဘူး။..........Mark Twain
(၁၁) အချစ်ဆိုတာ ချောက်ကမ်းပါးဘေးမှာ ပေါက်နေတဲ့ ပန်းတပွင့်နဲ့တူတယ်။
အဲဒီပန်းကို ခူးဖို့ရာ သတ္တိတွေရှိရမယ်။......Shakespeare
(၁၂) အချစ်ဟာ ဘ၀ကို လောင်မြိုက်စေတယ်။
အချစ်ဟာ ရှင်သန်ခြင်းကို စိုပြေစေတယ်။.....Johann W. Goethe
(၁၃) လူတွေရဲ့ အချစ်ကို မခံရတာ ကြီးမားတဲ့ ဝေဒနာဆိုးတရပ် ခံရတာနဲ့တူ
တယ်။ လူတွေကို မချစ်နိုင်တဲ့သူဟာ ရှင်လျှက်နဲ့ သေနေတာနဲ့ တူတယ်။
(၁၄) အချစ်ကို နားမလည်ခင်မှာ မိန်းကလေးဟာ မိန်းကလေး မဟုတ်သလို
ယောက်ျားလေးဟာလဲ ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူး။.....History Myers
(၁၅) ချစ်ခြင်း မေတ္တာဆိုတာ လူ့ဘ၀မှာ ပျံ့နှံ့နေတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိရင်
ဘာသာ၊ သမိုင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်မူနဲ့ အနုပညာဆိုတာလဲ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
(၁၆) ငွေကြေးကြောင့် လက်ထပ်တဲ့လူလောက် ယုတ်မာတာ မရှိဘူး။
အချစ်တခုတည်းအတွက်နဲ့ လက်ထပ်တဲ့လူလောက် မိုက်မဲတာ မရှိဘူး။
(၁၇) သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာ တူညီတဲ့ခံစားမူတွေ
ရှိရမယ်။ တယောက်လွတ်လပ်မူကို တယောက်က ၀င်မစွက်ဖက်ရဘူး။ပေါင်း
ဖက်ရခြင်းကို တန်ဖိုးထားရမယ်။ ချစ်ခင်မူကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။ ဒီအချက်တွေ
ကို လက်ကိုင်ထားရင် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး
အတွက် အလှဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။
(၁၈) အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးသလို အချစ်ကို ဆုံးရှုံးဖူးတာက တခါမှ မချစ်ဖူးတာ
ထက်စာရင် ကောင်းသေးတယ်။ Alfred Tennyson
(၁၉) အိမ်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အဆိုးအပြစ်နဲ့ ကျဆုံးခြင်းတွေ သိုဝှက်ထားတဲ့
တခုတည်းသော နေရာဖြစ်သလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ချိုမြိန်မူတွေကို သိုလှောင်
ထားတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ Bernard Shaw
(၂၀) လူ....လူ...လူ...လူဆိုတာ ရယ်မောခြင်းနဲ့ မျက်ရည်ကြားက ချိန်သီးတစ်
လုံးဖြစ်တယ်။ Lord Byron
အချစ်.....အချစ်.....အချစ်ရဲ့ ရင်ခုန်သံဟာ အကောင်းဆုံး အိပ်ရာဝင်တေး
Posted by Alex Aung at 8:53 PM No comments:
Harmful chemicals to human body
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ၀င်ရောက်နိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ
သုတေသီများက လူတွေ အသုံးပြုလျက်ရှိသော အစားအစာများ ထုပ်ပိုးထားသည့် ပလတ်စတစ်ဘူးများကို လေ့လာရာ ထိုပလတ်စတစ်ဘူးများထဲမှာ ဓာတုပစ္စည်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိထားရပါတယ်။ ၄င်းတို့မှာ –
(၁) Bisphenol –a(BPA) ပလတ်စတစ်ကို တောင့်တင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးသော ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။
တိရစ္ဆာန်များတွင် လေ့လာချက်အရ မျိုးပွားကျန်းမာရေးစနစ်ကို ထိခိုက်စေကြောင်းတွေ့ထားရပါတယ်။
အစားအစာ ထုပ်ပိုးထားသော ပလတ်စတစ်ဘူးများ၊ ပလတ်စတစ်ရေပုလင်း၊ ကလေးနို့တိုက်သည့် နို့ဘူး၊ ပလတ်စတစ်ဇွန်း၊ ခက်ရင်းစသည်များ။
(၂) Phthalates - ပလတ်စတစ်ကို ပျော့ပျောင်းသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အနည်းငယ်ဝင်ရောက်ရုံဖြင့် အမျိုးသားများတွင် သုတ်ပိုးကောင် အရေအတွက် လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ထားရပါတယ်။
ပလတ်စတစ် ကစားစရာအရုပ်များ၊ ဗီနိုင်း(Vinyl) စများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းအချို့နှင့် ရေမွှေးတို့တွင် ပါဝင်သည်။
(၃) BPDE - လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် မီးတောက် မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးရာမှာ သုံးပါတယ်။
အနည်းငယ်မျှသော BPDE များလေထဲသို့ လွတ်ထွက်လာနိုင်ပြီး တိရစ္ဆာန်များတွင် ၀င်ရောက်လွယ်မှုကြောင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၀ါယာကြိုးများ၊ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ၊ တီဗီနှင့် ကွန်ပျူတာများတွင်သုံးသည့် Plastic Casings များတွင် ပါဝင် ပါတယ်။
Ref: Time , 21.7.2008
Posted by Alex Aung at 5:13 PM No comments:
Ingredients Label on Snacks
အစားအစာထုပ်ပိုးထားတဲ့ အိတ်တွေ၊ ဘူးတွေပေါ်က အဟာရ အညွှန်းများ
ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ ယနေ့ကာလမှာ ထုပ်ပိုးထည့်သွင်းရောင်းချသော အိတ်တွေ၊ ဘူးခွံ၊ ကတ်ပုံးခွံတွေပေါ်မှာ ၄င်းတို့ရောင်းချသော အစားအသောက်ထဲမှာ ပါဝင်သည့် အဟာရအညွှန်းများ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအညွှန်းတွေထဲမှာ လူတစ်ယောက်တစ်နေ့တာ လိုအပ်ချက်နဲ့ ထိုအစားအစာတွင်ပါသော ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – အဆီ၊သကြားဓာတ်၊ ဆား တစ်နေ့ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ။ယခု ပါဝင်တာက ဘယ်လောက်ပမာဏဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ယခု အဲဒီ၂ချက်နဲ့တင် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ အချို့သော အဟာရအညွှန်းများဟာ ၀ယ်ယူစားသုံးမယ့်သူကို လှည့်စားပြီးရေးထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး သိရှိအောင်ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို လှည့်ဖြားထားတဲ့ စာသားများကို နမူနာအားဖြင့် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကိုလက်စထရောပါဝင်မှု(Cholesterol Free) မရှိဟုရေးထားခြင်း
ကိုလက်စထရောဆိုတာ သွေးကြောအတွင်းနံရံများကို အဆီချိုးကပ်စေပြီး နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း အန္တရာယ်များရှိတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းရွက်ဆီ၊ ဟင်းရွက် အသုပ်များပေါ်မှာ ဖျန်းရတဲ့ ဆော့စ်အဖြူလို အရာတွေထဲမှာ ကိုလက်စထရောပါဝင်မှုမရှိလို့ အညွှန်းစာတမ်းကပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ ဟင်းရွက်ဆီတွေထဲမှာ ကိုလက်စထရော ဆိုတာ မပါပေမယ့် ကိုလက်စထရောကို တက်စေသော ပြည့်ဝဆီ သို့မဟုတ် ဟိုဒရိုဂျင်နိတ်တက်ဖက်(Hydrogenated Fats) တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဟင်းရွက်ဆီတွေကို ကြော်လိုက်မယ်။ အပူချိန်များများနဲ့ အပူပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မကောင်းသော ကိုလက်စထရောများထွက်လာပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
(၂) အဆီနည်း (Lite) ဟု ရေးထားခြင်း
တချို့သော ဘီစကွတ်၊ ကွတ်ကီးစတဲ့မုန့်များမှာ အဆီနည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး (Lite) သို့မဟုတ် Light လို့ရေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်မတက်စေဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့။
တကယ်တော့ Light ရဲ့အဆီနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိပါ။အချို့သော Light ဟုရေးထားသည့်အစာများက အဆီ၁၁ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့က ၃၃ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဖြစ်ကာ၊တချို့ကျတော့ ၂၂ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် (Lite) ဆိုတိုင်းစိတ်မချရပါဘူး။
(၃) ဗီတာမင်များ ထပ်ဖြည့်ထားသည်(Added Vitamins) ဟုရေးထားခြင်း
အချို့သော ပေါင်မုန့်များနှင့် စီရီယယ်အမှုန့်များဟာ ဗီတာမင် ၈မျိုးပေါင်းစပ်ထားကြောင်း၊ သံဓာတ်၊ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်များဖြင့် အားဖြည့်ထားကြောင်း ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
အမှန်တကယ်မှာတော့ အချို့သောအစားအစာများကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါ အထူးသဖြင့် နူးညံ့နေအောင်Refining လုပ်တဲ့အခါ ဗီတာမင်များ ဆုံးရှုံးသွားလေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပိုဆောင်းပြီး ထပ်ထည့်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
(၄) အိုမီဂါ ၃ အဆီအက်စစ်ကြွယ်ဝသည် (Rich in Omega .3s) ဟုရေးထားခြင်း
အိုမီဂါ ၃အဆီအက်စစ်ဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေတယ်။ သင်ယူလေ့လာမှုပိုကောင်းစေတယ် ဆိုတာကြားဖူးကြမှာပါ။ တချို့သော အဆီထုတ်ထားသောနို့(Skimmed Milk) တွေဟာ အိုမီဂါ ၃အဆီအက်စစ် အများကြီးပါဝင်ကြောင်းကြော်ငြာလေ့ရှိပါတယ်။
အမှန်တကယ်ကတော့ အဲဒီ ရောင်းချတဲ့နို့ထဲမှာပါတဲ့ အိုမီဂါ – ၃အဆီအက်စစ်နဲ့ အဆီထူသော ငါးကိုစားခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်သော အိုမီဂါ ၃အဆီအက်စစ် ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် အများကြီးကွာခြားနေပါတယ်။ ဆော်လမွန်ငါး ၁၀၀ဂရမ်မှာပါတဲ့ အိုမီဂါ၃ အဆီအက်စစ် ပမာဏရအောင်ဆိုရင် အဲဒီရောင်းချတဲ့ နို့ကို ၁၀ပိုင့်လောက်သောက်မှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref: H & F , Dec 2006.
Posted by Alex Aung at 5:00 PM No comments:
Kid poems for Adult
(1) ညအခါ လသာသာ
(2) "တစ်၊နှစ် ကိုနာဂစ်
(4) "အစားအစာ ၀ါးစားပါ
(5) "ဟိုဘက်ကမ်းက ဗိုက်ပိန်ပိန်
(6) "ဖိုးရွှေကြီး ဖိုးရွှေကြီး
(7) " တနင်္ဂနွေ၊ တနင်းလာ
(8) "မုန်တိုင်းကို စက္ကူကပ်
(9) ဘဘ၀၀ ထလို့က
(10) ဘဘ၀၀ စိတ်ဓါတ်ကျ
အနောက်က Pressure ရ
(11) "ရွာနံဘေးက ချောင်းကလေး
မည်သူမျှ မဆယ်ကြ။" ….ဟင့်…ဟီး..အီး
(12) အလောင်းလေးများ ဖွေးလို့စီ
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း မေးလ်က ကူးထားတာပါ။ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးနော်...။
Posted by Alex Aung at 4:40 PM No comments:
I haveatoothache mom!
ကလေးတွေဟာအချိုကြိုက်လေ့ရှိတာကြောင့်လည်းကောင်း၊ စားပြီး သွားတိုက်ရမှာ ပျင်းရိတာကြောင့်လည်း ကောင်းပါးစပ်နဲ့ခံတွင်း သွားကြားတွေ ထဲမှာကပ်နေတဲ့စားကြွင်းစားကျန်များကတစ်ဆင့်ဗတီးရီးယားပိုးတွေပေါက်ဖွားပြီးသွားရဲ့အပေါ်ယံကြွေလွှာတွေကိုဆွေးမြည့်လာစေပါတယ်။သွားများရဲ့ကြွေလွှာ(အပေါ်ယံလွှာ) ဆွေးမြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာသွားရဲ့အပြင်လွှာတွေမှာတင်ရပ်တန့်မနေဘဲ သွားတွေရဲ့ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့အလယ်ဗဟိုထဲရှိ အာရုံခံနာဗ်ကြောများ တစ်လျှောက်ထွင်း ဖောက်ဝင်ရောက်လာကာနာကျင်ကိုက်ခဲလာ တက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အအေးစာတွေဖြစ်တဲ့ရေခဲ၊နို့အေးချောင်း၊အိုက်စ်ခရင်းမ်စသည့်တို့ဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်၊စွပ်ပြုတ်ပူပူ စသည်တို့ကိုစားသောက်ရင်း သွားနဲ့ ထိမိပြီးတော့ ပိုဆိုးပိုနာကျင်တတ်ပါတယ်။သွားပိုးစားတာနဲ့သွားဖုံးရောဂါ
- ပြီးရင်ကလေးကို ပါရာစီတမောအရည်ကဲ့သို့အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးရည်ကို သွားဆရာဝန်ထံမသွားမီ တိုက်ထားပါ။
- သွားကိုက်သက်သာအောင်ပုလင်းငယ်တစ်လုံးမှာရေးနွေးထည့်ပြီးတဘက်အုပ်ကာကလေးပါးပေါ်တင် လှိမ့်ပေးရင်အကိုက်အခဲသက်သာပါလိမ့်မယ်။
- သွားပေါက်ထဲကိုလေးညှင်းဆီလိုအပူတွေ၊ အစပ်တွေရမ်းထည့်မပေးပါနှင့်။ ကလေးရဲ့သွားဖုံးတွေပျက်စီး စေတတ်ပါတယ်။
- ဘာမှမဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်သွားနဲ့ခံတွင်ကျန်းမာရေးကို၆လတခါသွားဆရာဝန်နှင့်မှန်မှန်ပြသပေးပါ။ ဒါမှမိမိကလေးဟာ သွားဆရာဝန်နှင့် ရင်းနှီးလာပြီး ယုံကြည်မှုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်၏ ကျန်းမာရေးပညာပေး အလေ့အကျင့်၊ အပြုအမူကောင်းများကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပုံမှန်ရရှိစေပြီး သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
- ကလေးများအား သကြားလုံး၊ချောကလက်၊ဆနွင်းမကင်း၊ကျောက်ကျောကဲ့သို့ ချိုလွန်းသောမုန့်အချိုများနှင့် အချိုရည် အအေးများကြိုက်တတ်အောင် မိဘများက မပြုလုပ်သင့်ပါ။ သင့်တင့်မျှတစွာ ကျွေးမွေးသင့်ပါ တယ်။ အချိုစာတွေကျွေးဖြစ်ရင်လည်း အစာစားပြီးတာနဲ့ ပလုတ်ကျင်းခိုင်းပါ။ ပလုတ်ကျင်းမကျင်း စောင့်ကြည့်နေပါ။
Posted by Alex Aung at 4:39 PM No comments: